स्वास्थ्य पेज » बिहान दुई घण्टा आफ्ना लागि ! बिहान दुई घण्टा आफ्ना लागि ! – स्वास्थ्य पेज
बिहान दुई घण्टा आफ्ना लागि !
अहिले मानिसहरु कुनै न कुनै रुपले मानसिक समस्यामा छन् । उनीहरुसँग पूर्ख्यौली ज्यायजेथा भएर पनि, मनग्ये आम्दानी भएर पनि, मानप्रतिष्ठा भएर पनि सुख छैन । आनन्द छैन । हर्ष छैन ।
मानसिक रुपमा मात्र होइन, शारीरिक रुपमा पनि हामी अनेक रोगले घेरिएका छौं । कसैलाई मधुमेह छ, कसैलाई थाइराइड छ । कसैलाई बाथले सताएको छ, कसैलाई दमले गलाएको छ । कोही उच्च रक्तचापको औषधी खाइरहेका छन्, कोही पायल्सको उपचार खोजिरहेका छन् ।
हामी किन यति रोगी भइरहेका छौं ? हामी किन यति तनावग्रस्त भइरहेका छौं ? हाम्रो शरीर किन शिथिल भइरहेको छ ? हाम्रो मन किन बेचैन भइरहेका छ ?
यसमा हाम्रो सोंच, चिन्तनसँगै जीवनशैली प्रमुख कारक बनेको छ ।
अहिले हामी जसरी हुन्छ धनदौलत जोड्ने चक्करमा छौं । पैसा कमाउने अनेक यत्नमै हाम्रो दिन वित्दो छ । बिहान उठेदेखि हामी पैसा सोच्छौं । र, राती ओछ्यानमा ढल्किएर सुत्नुअघि पनि पैसा नै सोच्छौं । यसरी पैसा वा धन कमाउने चक्करमा लिप्त भएर हामी आफैलाई बिर्सिरहेका छौं । कतिबेला खाने, के खाने, के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको हेक्का हुँदैन । मर्निङवाक गर्नुभन्दा हामीलाई घरजग्गा खरिद-बिक्रीको कुरा गर्नु बढी फलदायी लाग्छ ।
एकपटक सोचौं त यदि हामीसँग पर्याप्त पैसा भयो । धनदौलत भयो । जहाँ जान सकिने अवस्था भयो । जे खान सक्ने सामथ्र्य भयो । तर, शरीर रोगी भयो भने ?